झागाँझोली दुर्घटना मेरा पतिले गराएको होइन « paniphoto
« संसदमा बसि नसक्दै प्रधानमन्त्रीका लागि उठिसके ओली हात्ती चढ्ने रहर – ‘फेसबुक फण्डा’ »	झागाँझोली दुर्घटना मेरा पतिले गराएको होइन
By -पानीफोटो- on Thursday December 15, 2011	देवुकुमारी आले थापा (मृतक चालककी श्रीमती)गत असोज २६ गते सिन्धुली जिल्लाको झाँगाझोली गाविसको गैरीपुछार भन्ने ठाउँमा बस दुर्घटना भई चालकसमेत ४१ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त दुर्घटनाको छानविन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन बाहिर आएको छ ।
त्यस आधारमा हामी पीडीत पक्षले थाहा पायौं, आयोगको प्रतिवेदनमा चालक र यात्रुबीच झगडा भएको, चालक माथि कुटपिट भएको, कुटाई पछि परिवारलाई म अब फर्किन्न भनेर चालकले फोन गरेको, आत्मघात गर्ने उद्देष्यले उनले गाडी अनियन्त्रित किसिमबाट चलाएको भन्ने उल्लेख रहेछ । आयोगले सत्यतथ्य बुझेर मात्र गर्नुपर्नेमा पीडीतको परिवारलाई झनै पीडित र मर्माहत बनाउँने किसिमले प्रतिवेदन तयार गर्नु दुखद छ । दुर्घटना हुनु अघि चालक र श्रीमतीबीच कुराकानी भएकै छैन । सहचालक, नजिक सिटमा बस्ने जिवित घाइतेहरुसँग बुझ्दा पनि सत्यतथ्य थाहा पाउँन सकिन्छ ।
गाडीभित्र बसेका अधिकांश यात्रुको मृत्यु भएको छ । छतमा बस्ने प्राय सबै यात्रु जिवित र घाइते छन् । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ गाडी अनियन्त्रित किसिमबाट चलाईएको थिएन । चालक र श्रीमतीबीच म अब घर फर्किन्न भन्ने कुरा भएको भन्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेछ । छानविन टोलीले हामीलाई भेटेकै छैन । आयोगले सिन्धुली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर चालकका आत्मघाती कदमका कारण दुर्घटना भएको हो वा अन्य प्राविधिक कारणबाट भएको हो भन्ने सम्म नबुझी आयन्दा दुर्घटना हुन नदिन के के गर्नुभएको छ मात्र सोधपुछ भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । आयोगको प्रतिवेदन शतप्रतिशत झुटो हो । यसरी झुटो प्रतिवेदनले हामीलाई दुखमाथि दुख थपिदिएको छ । चालकले जानाजान दुर्घटना गराएको भन्ने प्रतिवेदन झुटको पुलिन्दा हो । यात्रु र चालकबीच पुरानो गाडीको बिषयमा झगडा भएको भन्ने पनि सरासर गलत हो । गाडीमा भाडा उठाउँने काम साहु आफैले गरेका थिए । पुरानो गाडीका कारण साहुसँग झगडा हुन सक्छ, मजदुरी गर्ने चालकसँग हुनै सक्दैन । त्यसैले पनि चालकको आत्मघाती चालाका कारण दुर्घटना भएको भन्ने सत्य होइन । ७०, ८० यात्रुलाई बचाउँछु र आफु पनि बाँच्छु भनेर लगाउँदा लगाउँदै ब्रेक नलागेको र प्राविधिक गडबडीका कारण कर्तव्य पालनको सिलसिलामा चालकको ज्यान गएको छ । घरमा ८० बर्षे वृद पिता, ससाना तीन छोरी र श्रीमतीलाई बिर्सेर चालकले आत्मघात गर्ने चिताउँन पनि सकिदैन । नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोगका सदस्यहरुले हामीलाई भेट्नु भएकै छैन । हामीलाई भेट्दै नभेटी प्रतिवेदन बनाउँनु अनैतिकताको हद हो । दुर्घटना भनेको भवितव्य हो । त्यसको दोष कर्तव्य पालना गर्दागर्दै दिवंगत चालकको टाउकोमा थुपार्नु कहाँसम्मको न्याय हो ?
अन्त्यमा यसै लेख मार्फत नै असोज २६ गतेको दुर्घटनाबारेको आयोगको प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित नभएको जानकारी गराउँन चाहान्छु । चालक प्रेम कुमार आले थापाकी श्रीमतीभद्रकाली-३, सिन्धुली Tweet
« संसदमा बसि नसक्दै प्रधानमन्त्रीका लागि उठिसके ओली हात्ती चढ्ने रहर – ‘फेसबुक फण्डा’ »	6 comments to झागाँझोली दुर्घटना मेरा पतिले गराएको होइन
· जवाफ दिनुहोस्	जो होचो त्यसको मुखमा घोचो भनेको यही नै हो । त्यसतो बाटोमा गाडी कुदाउँने साहु, कुदाउँन अनुमति दिने प्रशासन सबै चोखा तर बिचरा डाइभर दोषी । जानी जानी मान्छे मारेको हो भनेर हत्यारा करार दिएर उसका पुस्तालाई नै हत्याराको सन्तान बनाउँनु कतिको जायज छ । परिवार नभेटी पनि कही प्रतिवेदन बन्छ । जे गरे नि हुने यो देशमा ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	प्रतिक महर्जन
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	मनिष लिम्बु
· जवाफ दिनुहोस्	भन्न सकिन्न । खै के खै के ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Prabin Ghorsane
· जवाफ दिनुहोस्	asko feri satya tathya khoji garinu parchha. asari hachuwako varma nikaaleko pratibedan amaanya vandai teska member harulai karbahi garnu parchha.